Dhaqan, Diin iyo Anshax Maxaa Isku Soohey? – Kaasho Maanka
Qaybta: Arrimaha Bulshada, Dhaqan, Diinta Islaamka, Falsafad, Xulka
Caqiidooyinka ba’an ee diimaha laga dhaxley waxa kamid ah in garashada dadku dhantaallantahey, oo hadduusan jirin dastuur rabbaani ah oo dadka celiya dhaqan xumo walba lagu kacayo. Odhaah hore baa waxey leedahey, “Intaad nin xagato, dabadeedna fiirso bahal dhiigaya.” Waxa loola jeedaa, anshax wanaagga iyo xadaaradu waa uun maqaarka sare ee ku dahaadhan waxshinimada iyo qubxiga dadka gunta uga jira, caqliguna u horseedo. Wax cusub maaha in diimuhu intay dabciga dadka soohdimeeyaan, wixii wanaagsan Allah u nisbeeyaan, inta xunna insaanka qoorta u sudhaan. Hase yeeshee, sida dunida maanta la joogo ay marag u tahey, diimuhu ma laha qiil ay ku shaabadeystaan anshax wanaagga. Xeerarka iyo shuruucda u qaydanna waxa hoy u ah hab fakar-dhaqameed duug ah oo maanta in aynu maaweelino dib-dhac iyo foolxumo inagu tahey.
Ilaahey oo Muuse milkinaya xeerarka ay tahey in bulshadu isku dhaqdo (The 10 commandments).
Diimuhu waxey ku andacoodaan inay marjac u yihiin anshaxa (ethics), la’aantoodna aysan jirin wax bulshadu iskaga gaashaanto cawaannimada iyo fuxshiga. Dooddan se marka loo kuur galo lugo ay isku taagto ma laha, xitaa haddii wadaadada qowlkooda loo tixraaco. Tusaale ahaan, Muslinku waxey aaminsanyihiin in Allah waxa wanaagsan dadka faro, wixii xunna reebo. Laakiin hadduu isla Allah go’aaminayo waxa “wanaagsan” ama “xun”, waxa nuxur beelaya wanaagga/xumaha. Haddii kufsiga la fari lahaa, kaalmadana la reebi lahaa, kufsigu “wanaag” ayuu noqon lahaa halka kaalmaduna noqon laheyd “xume.” Muslinku laakiin warkan uma cuntamayo, oo wuxu la soo boodayaa “Allah siduu wax xun u fari karaa?” Su’aasha ka habboon se waxa weeyaan, “Maxaa u diidaya? Soo siduu doono yeele maaha?”
Mufakiriin ka tirsanaa muctasiladii hormuudka u aheyd xadaaraddii miigganeyd ee ka jirtey dunida Islaamka xilligii khilaafada cabbaasiyiinta, ayaa iyaga oo u jaamo idlaystey inay ka jawaabaan su’aasha ah: “Ilaahey ma wuxuu faro ayaa wanaagsan, mise wixii wanaagsan ayuu faraa?”, waxey dooddoodu isugu soo biyo shubmatey in mandiqqa lagu shaandho-miirayo anshaxa, ee xumaha iyo samaha lagu kala soocayo, ka madaxbannaan yahey Allah. Sidaas darteedna ay jiraan waxyaalo uusan Allah u badheedhi karin sida beenta iyo gafka. Haddii kale oo la dhaho marba wuxuu Allah faro ayaa wanaagsan (arbitrary), wax wanaag ama xume la dhaho ma jiri karaan. Waxa bartan baylah ku noqonaya sifada “wanaagga” ee Allah isku sunto. Intaa waxa dheer, waxey ka dhigantahey bulshada Muslinku waa sidii dameeri dhaan raacdey oo kale, oo kolba dhinacuu haatuf uga heeso u karaar jabsha. Midey noqotaba, ma jiro caqli isku soohaya diimaha iyo anshaxa suuban.
Tol waxa loo yahey nin goommoon garashadii, iyo nin gardarran qabashadi
Reer miyigu marka ay qof ku sifeynayaan “tolnimo”, waxa jiro shuruudo u xeeran beel kasta oo la rabo in qofkaasi kasoo baxo. Waxa kamid ah shuruudahaas in qofku kaalmeeyo xubinka beesha ka tirsan ee baahidu hayso, midka gardarro ku indho adeygana u naqo, oosan ka yeelin inuu dhaawac gaysto. Sidaa darteed, shakhsiga raba inuu tolkiisa wax la qaybsado waxa ku waajiba inuu shuruudahaas buuxiyo, islamarkaana hanto sifada “tolnimo.” Bulsho walba waxa u dajisan xeerar sidan oo kale qaabeeya habkooda dhaqan-dhaqaale, kana saacidda bulshada daboolista baahiyaha duruuftu keento.
Yoolku siduu rabo ha noqdee, xeerarka ay bulsho leedahey waxey mar walba ka turjumaan mabaadi’da laga tilmaan qaadanayo kolka xeer-dajinta iyo xaqsoorka lagu hawllan yahey. Soomaalida reer miyiga ah mabaadi’dooda waxa kamid ah maah-maahda odhaneysa, “tol waxa loo yahey nin goommoon garashadii, iyo nin gardarran qabashadii.” Mabda’an xeerarka uu ugogol xaadhayo cidda ay saacidayaan waa tolka, oo kooda baahiyeysan si wadajir ah ayaa loo kaalmeyn, ka gardarro ku dhaqaaqana si wadajir ah ayaa loogu caqli celin. Laakiin reerka colaaddu ka dhexeyso ee nacabka ah, mabda’an kama soo horjeedo in inta guluf lagu qaado, dabadeedna xoolo iyo hantidooda lasoo jabsado. Muhiimaddu waa uun in xoolahaas lasoo jabsadey tolku isku anfaco.
Marka Baadi goob loogu jiro caddaalad iyo nidaam laga dugsado xaqdarrada, waxa la raadinayaa waa mabda’ haga xeer-dajinta iyo nidaamka xaqsoor ee bulsho leedahey. Mabda’ duug ah oo laga dhaxley bulshooyin jahli iyo duruufo adag ku sugnaa, sharciyada ka dhalan karaa waa kuwa si lamid ah mar walba ka turjuma jahli iyo nolol cidhiidhi ah. Bulshadeennu iyada oo og in dhaqan reer guuraa uusan la jaanqaadi karin dunida maanta, maxaa ku hawley inay mabaadi’ reer guuraa, diin iyo dhaqan midkey rabaan salka haku hayeen, ay shaati casri ah ku qasbaan?
Billow aadmigii aan u dhashaan,
yara ku dhaamaaye,
[dhurduhu] Geedihii dhulkiyo hawlkarnimo,
Soomaalidu waa dad ay ku jirto qab ka itaal weyn iyo isla qummani xad dhaaf ah. Iyaga oo maanta indho fiiqan ku daalacanaya sida habsamida leh ee dunida badideedu u meelmarisey mabaadi’da lagu dhawrayo xuquuqda insaanka, oo qaarkood la cajabsan yihiin anshax wanaagga bulshooyinka horumarey, haddana kolka la dhaho xeerar gaalo laga soo xigtey ha la dardar galiyo, sidii xoorkii ayey cadho inay la bakhtiyaan waxyar u jirsanayaan. Markey dhago shisheeye inaga maqan yihiin, wadaad wahaabi ayeynu afka u dhiganeynaa oo la rabaa in mugdiga laga siraadsado. Kolka beesha dunidu indho gaar ah inagu haysana, bootar iyo makeup ayaa dhaqankii lala daba tumanyahey. Jahwareer ayaa bulshadeenna dalambaabiyey, oo dhinac waynu ognahey haddii horumar la rabo bulshooyinka loo baahanyahey in la tusaaleysto. Dhinacna qab iyo caqiido qallafsan baa lafaha inagaga jirta oo nidaamkii anfaco loogu hagaagi lahaaba diin haddeyna is hardin, soomaalinimo ayeyna is cafineyn.
wow aad ayaan uga helay qoraalkaan, su’aal, sidee waxaan u qortaa/q0rtiin idinki somalia jooga, kama yaabin in la idin dhameeyo? waxaan ku leeyahay horumar baa sidaa ee siu wad, sidiu reer galbeed xilligii Renaisance age ayaa fikiro/afkaar wanaagsan na siineysaa. is ilaali huuno
Last edited 1 Sannad Kahor by Dil wadaadkasta
11 Bilood Kahor
Reply to Dil wadaadkasta
Mahadsanid sxb, runtii cabsi badani way jirtaa gudaha deegaanada soomaalida balse haddii adiga fikirku kugu eg yahay oo feejignaan badan samayso cidina ma ogaan karto waxa aad internet ku qorto
4 Bilood Kahor
Caqli xumo heerkii u dambyasay.
Markaan ka rajo waayey baraha aad ku leedihiin facebook iyo waxyaalahaad soo post garaysaan ayaan is idhi dhinac kale ka day, show halkanaabad kusii liidataan.
War sxbayaal umada soomaalidu waa dad diintooda ku fara adage carabiga aad u bartoo qoomiyada carabta diinta shaki ka galiya.
Waa maxay lacag?
Qaybta: Diinta Islaamka, Ganacsi
Si lacagi waxa ay tahay aad u fahantaan iyo danta keentay in asal ahaan loo baahdaa gabi ahaanteedaba kaliya waxaad sawirataa nidaam aysan lacag oo dhami jirin iyo sida ay dadku baahiyadooda u dabooli karayaan.Sidaan qormooyinkii horaba ku soo sheegay, qof walbaana uu si fudud u fahmi karaayo, ma jiro qof qura oo wax walba uu u baahanyahay kaligii soo saaran karo ama sameesan kara, taasi oo qasab...
Dayax iyo Qorrax madoobaadka
21 bishan(June) ee sannadkan(2020) waxa madoobaan doonta cadceedda, waxa si fiican looga arki doonaa wadamada inyar ka sarreeya dhulbadhaha. Nasiib daro awawyaasheen iyo dadkii inaga horeeyay aad ayay uga cabsan jireen dayax iyo qorrax madoobaadka, waxay moodi jireen inay ilaahyada ka cadhaysiiyeen, marka dhacdooyinkan dabiiciga ahi dhacaan waxay dadku baryi jireen ilaahyada xoolana way u sadqayn...
Dhaqanka & Diinta: Qaar baa cuna hilibka dadka dhintay!
Qaybta: Dhaqan, Xulka
Dunida waxaa ka jira dhaqamo kala gedisan, tusaale dhaqanka Bushman-ka ku nool lama dagaanka Kalahari ee Koonfurta Qaaradda Afrika, waxaa ka caadi ah in dumarku inta kore ka dhar la’aadaan. Qaawanaantaasi waxba ugama duwana, sida aan anaga u aragno dhar xirashada; raggooda kuma ashqaraaraan, kumana dhaygagaan dhar li’ida dumarkooda. Waxaa la mid ah Turkana-da iyo qaar kaloo badan.
Waa kuma Siyaasi?
Ereyga “Siyaasi” af soomaaligii hore waxa uu ku lahaa macne foolxun oo ah “Khaa’in” ama “Sirlow”, laakiin macnaha uu maanta leeyahay waa fasiraadda uu carabiga ku leeyahay ee ah “Qof saameeya arrimo guud ee dad badan ka dhexeeya”. Siyaasi afafka qalaad ma aha khiyaano iyo sir ee waa qof hibo maskaxeed u leh in uu ka doodo ama uu ka shaqeeyo waxyaalaha dadka guud ka dhexeeya.Waxaa la sheegaa dadka...
W/Q: Kudil Waaq 10th July 2020
Gabaati mise Gadasho